ဘယ်လိုဥယျာဉ်မှူး | ဇန္နဝါရီလ 2022
2022 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: ဘယ်လိုဥယျာဉ်မှူး
Beginners များအတွက်မိုးလုံလေလုံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း - သင်သိသင့်သောအခြေခံများ
အိမ်တွင်းဥယျာဉ်ခြံသို့အစပြုပြီလော။ ဤဥယျာဉ်ဥယျာဉ်၏အခြေခံစာရင်းသည်သင့်အားလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့စတင်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ စက်ရုံ၏ဘဝလည်ပတ်မှုနှင့်သင်ကြီးထွားလာရန်အထောက်အကူပြုသောသဲလွန်စများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
နွေ ဦး ဥယျာဉ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း - ကြီးထွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်သင်ဘာလုပ်ရန်လိုအပ်သည်
နွေရာသီဥယျာဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ရာသီအလိုက်လာရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နွေ ဦး ဥယျာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံးစတင်မှရရန်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုရှာဖွေပါ!
Peat Pots: သင်၏ဥယျာဉ်အတွက်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးစေသောစိုက်ပျိုးသူများ
သင်သည်အစေ့များစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား၊ သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောအစားထိုးစိုက်ပျိုးရန်အတွက်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ရွေးစရာကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးအိုးများသင့်စာရင်းတွင်ဖြစ်သင့်! ဒီဂေဟစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနည်းလမ်းကိုဘယ်လိုလေ့လာထားသလဲ၊ ဒီနေရာမှာဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာအားလုံးလေ့လာပါ။
အဆင့်မြင့်ဖက်ရှင်နှင့်အ ၀ တ်အစား